Jimco, Nofeembar 6, 2015 Axad, Janaayo 15, 2017 Douglas Karr
Haddii aad ku jirto warshadaha suuqgeynta emaylka, waxaa laga yaabaa inaad ka maqashay wax ku saabsan DMARC. DMARC waxay u taagan tahay Xaqiijinta Fariinta ku saleysan Domain, Reporting and Conformance. Wixii macluumaad dheeri ah, waxaan si weyn ugula talin lahaa goobta Agari iyo dukumiintiyada iyo dukumiintiyada DMARC ee ku saabsan mowduuca. Sida laga soo xigtay khubarada ku sugan 250ok, email-keenayaga, halkan waxaa ku yaal faa iidooyinka DMARC: Waxay dejineysaa howlgalka iyo tarjumaadda borotokoollada xaqiijinta emaylka ee caan ku ah iyo baahinta ballaaran ee SPF iyo DKIM Kaa caawinayaa
Waa maxay Cadeynta Emailka? Sidee bay saameyn ugu leedahay samatabbixinta?
Jimco, Nofeembar 14, 2014 Axad, Janaayo 15, 2017 Douglas Karr
Waxaa jira jahli badan oo halkaa ka jira suuqleyda iyo xirfadleyda IT-da markay timaado iimayl gaarsiinta iyo meelaynta sanduuqa. Shirkadaha badankood waxay si fudud u aaminaan inay tahay geedi socod fudud oo markaad adigu dirto emaylka… oo ay gaarto meeshii loo baahdo. Qaabkaas uma shaqeeyo - Bixiyeyaasha adeegga internetku waxay leeyihiin dhowr qalab oo ay wataan si ay u hubiyaan isha iimeylka una caddeeyaan inay yihiin ilo sumcad leh ka hor